Akụkọ - Kedu ihe mere ụlọ akwụkwọ ọta akara jiri ahọrọ nkume ụlọ plastik
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ojiji nke ụlọ plastik nkume mejupụtara n'ụlọ akwụkwọ ọta akara na-agbasawanye, ọtụtụ ụlọ akwụkwọ ọta akara nwere ike ịhọrọ ịtọba SPC. Ala bụ ụdị mpempe akwụkwọ mgbe emepụtara site naSPC flooring Production Line. Site na ihe owuwu ahụ, a na-ekekarị ya na mpempe akwụkwọ ahaziri ahazi, mpempe akwụkwọ mejupụtara multilayer, na mpempe akwụkwọ ọkara jikọrọ ọnụ; site na ọdịdị ahụ, a na-ekewa ya na ihe nwere akụkụ anọ na ihe warara. NaSPC flooring Ime igwe enwewo mmetụta dị ukwuu na ndụ mmadụ kemgbe ụbọchị a mụrụ ya. Stone plastic mejupụtara n'ala na-akpọ nkume plastic n'ala tile. Aha aha kwesịrị ịbụ "PVC vinyl floor". Ọ bụ a ọhụrụ ụdị nke ala mma ihe mepụtara site na elu-edu na elu-tech nnyocha na mmepe. Ọ na-eji okwute marble na-eme ka ala dị elu ma dị elu. The siri ike isi oyi akwa nke eriri network Ọdịdị, elu kpuchie na a super eyi na-eguzogide polima ịkwanyere eyi na-eguzogide oyi akwa, nke na-esichara site na narị usoro.
SPlọ ụlọ akwụkwọ ọta akara SPC bụ ụdị ala SPC, nke e mere kpọmkwem maka ụlọ akwụkwọ ọta akara dị ka njirimara nke ụlọ akwụkwọ ọta akara. Ebe ọ bụ na ụlọ akwụkwọ ọta akara nke SPC nwere ọtụtụ uru, ndị mmadụ toro ya kemgbe ọdịdị ahụ. Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ ụlọ akwụkwọ ọta akara etinyela ụdị ụlọ ụlọ akwụkwọ ọta akara nke SPC. Enwere ike igosipụta njirimara nke njirimara na ọdịnaya ndị a:
Nke mbụ, ọ na - enyere aka ịhụ na nchekwa ụmụaka. SPlọ SPC nwere njirimara nke ịdị nro na elasticity, nke nwere ike belata mmebi nke ụmụaka mgbe ha dara. Ebe obu na umuaka na-aru ike, obere akpachapuru anya ga ada ma bute nsogbu, obughi nani umuaka, kama o gha aha ulo akwukwo a. Ọdịdị nke ala plastik nke mejupụtara ụlọ akwụkwọ ọta akara na-ebelata mbibi nke ụdị mmebi a kpatara, ya mere ụlọ akwụkwọ ọta akara nabatara ya.
Nke abuo, nhicha na mmezi nke ụlọ akwụkwọ ọta akara nke SPC dị mfe. N'ihi na ụmụaka na-adịkarị unyi n'ala, ihicha ala nke ụlọ akwụkwọ ọta akara na-abụkarị ọrụ siri ike. Enwere ike iji SPC dị ka ihe eji akwa ihe nke nwere ike iji nhicha mmiri sachaa ya, tinyekwa ihe kwesịrị ekwesị nke nhicha nhicha na mmiri.
Nke ato, ụlọ akwụkwọ ọta akara SPC nwere njirimara nke ndụ ogologo. Ala nkịtị dị ike, ọ dị mfe imebi mmepe nke ụmụaka, ọ naghị adịte aka, ọ dịkwa mfe ịkpata nsogbu dịka mgbawa. N'ụzọ dị iche, ụlọ akwụkwọ ọta akara nke ụlọ akwụkwọ ọta akara na-agbatịkwu ndụ ọrụ nke akụrụngwa anyị.
Isi ụlọ ọrụ na-enye ndị magburu onwe SPC flooring Production Line, anyị bụ ndị ọkachamara na ezi ahụmahụ! Mmadụ Bịa na ase na anyị ahịa otu!
Post oge: 2021-02-28